Site na: KongoLisolona: Septemba 19, 2020 00: 20 Enweghị asịsa
ha n'ike, taa anyị ahụhụ ma gbuo anyị.
Oke osimiri juputara na aru anyi.
Anumanu shark na-eri oriri n’ahụ anyị ruo mgbe ike gwụrụ ha.
Ma ozi nke Jizọs Kraịst bụ ịhụnanya, mma ọ dịghị mgbe ha tinyere ozi nke Jizọs Kraịst.
Anyị ji mkpụrụ osisi amata osisi. Omume ha gosipụtara onye ha bụ, mMana anyị akpọghị ha ndị na-eyi ọha egwu mgbe ha ka njọ karịa ndị na-eyi ọha egwu. Nke a bụ ọdịdị nke Iso Christianityzọ Kraịst na Ndị Kraịst.
Ọkt30 07: 12